Filoha RAVALOMANANA Marc : « afa-baraka imason’izao tontolo izao Madagasikara » | Site officiel du collectif GTT Gasy Tia Tanindrazana
Filoha RAVALOMANANA Marc : « afa-baraka imason’izao tontolo izao Madagasikara »
Resahina manerana ny tany ankehitriny ny mikasika ny tsy fahafahana maneho hevitra malalaka eto Madagasikara. Na any amin’ny fivorian’ny parlemantera ACP any Danemark na any amin’ny fankalazana ny andron’i Afrika atsy Afrika Atsimo dia resa-be izay fangejana ny Malagasy izany. Tsy mbola mananontanona arak’izany ny fankatoavana iraisam-pirenena satria tsy mbola voahaja an-tsakany sy an-davany ny tondro zotra izay fifanarahana politika neken’izao tontolo izao sy nankatoavin’ny samy Malagasy ifampitondrana ao anatin’ny tetezamita.
Amin’ny maha-zo fototra izany fahafahana maneho hevitra izany mantsy dia voasoritra mazava ao anatin’ny tondro zotra fa tokony hanaja izany ny fitondrana tetezamita. Niantso ny fahatsiarovan-tenan’ny mpitandro filaminana arak’izany ny Filoha RAVALOMANANA ary nankasitraka ny fanambarana izay nataon’ireo manamboninahitra ambony misotro ronono izay nampahatsiahy an’ireo « zandry manana andraikitra » ny fomba tokony hatao amin’ny hetsika am-pilaminana toy ireny.
Nambaran’ny Filoha fa tokony hieritreritra tsara aloha ireo milaza fa matihanina amin’ny asany fa sao fampianarana efa tamin’ny andron’ny fanjanahan-tany no ampiharin’izy ireo. Nomarihin’ny Filoha RAVALOMANANA ary fa mbola vonona hatrany ny hifampiresaka ny tenany ho fitadiavana ny vahaolana ho an’ny Firenena. Nentaniny ihany koa anefa ny mpandala ny ara-dalàna mba hahay haneho hevitra am-pilaminana tokoa mba tsy ahafahana manome vahana ny herisetra tian’ny mpitondra hampiharina amin’ny vahoaka.